Dowladda Turkiga oo soo dhaweysay Ka Laabashada Muddo Kororsiga Farmaajo – Radio Daljir
Dowladda Turkiga oo soo dhaweysay Ka Laabashada Muddo Kororsiga Farmaajo
Maajo 1, 2021 9:46 g 0
Turkiga ayaa soo dhoweeyay go’aankii baarlamaanka Soomaaliya uu Sabtidii qaatay kaasoo dhigayay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhacdo doorashada dalka Soomaaliya.
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa lagu soo bandhigey mowqifka dowlada Turkiga ee arrimihii u dambeeyay ee dalka Soomaaliya.
“Waxaan soo dhaweyneynaa go’aanka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya uu maanta (1-da May) qaatay, kaasoo ayidsan yihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashada iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii Sebtember,” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Waxaan rajeyneynaa in horumarkan uu u adeegi doono sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalada wax ku oolka ah ee daneeyayaasha siyaasada iyada oo aan dib loo dhigin lana hubiyo horumarka ku saleysan is afgaradka bulshada iyadoo laga gudbayo khilaafaadka,” ayaa lagu daray.
Warbixinta Tartan & Tacliin: Habeenkii 11aad, iyo Dugsiyadii xalay fooda isdaray (daawo)